Global Voices teny Malagasy » Vonona Handray TEDx ao Damaskosy Ve i Syria Nefa ireo Mpihevitra ao Aminy na any Am-ponja na any an-tsesitany Na maty? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Janoary 2015 20:29 GMT 1	 · Mpanoratra Leila Nachawati Rego Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Syriana iray avy ao Ghouta mandefa hafatra manohitra ny fanatontosana ny TEDx ao Damaskosy. Sary: pejy Facebookn'i Kesh Malek.
“Aza atao ao Damaskosy izany azafady”, izany no hafatra nozarain'ilay Syriana avy ao amin'ny faritra iharan'ny fahirano ao Ghouta mikasika ny fankalazana ny kaonferansa TEDx amin'ny 29 Janoary. Niteraka fanehoan-kevitra an-tserasera marobe ny hetsika, misy ny manohana ary misy koa ny manohitra
Iray amin'ireo tanàndehibe marobe ao Syria i Ghouta izay niharan'ny fahirano, fidarohana baomba, fandravana ary ny hanoanana hatramin'ny nisian'ny fitroaram-bahoaka tamin'ny volana Martsa 2011. Mifanohitra amin'ny fikasana haneho an-tsary ny fiverenana amin'ny laoniny any amin'ireo faritra fehezin'ny fitondrana ny toe-javamisy tsy zakan'ny ankamaroan'ny mponina. Hoan'ireo mpikatroka maro, dia dingana mankany amin'ny famerenena amin'ny toeran'ny antokon'ny fitondrana amin'ny heriny teo aloha ny fankalazana ny TEDx.
Anisan'ireo feo malaza indrindra manohitra ny hetsika TEDx ny vondron'olom-pirenena Kesh Malek , izay nanasongadina ny feon'ireo manohitra izany fankalazana izany.
Nilaza kosa ny hafa fa fanararaotra hoan'ny Syriana ny hetsika mba hivoahana amin'ny zava-doza atrehin'ny firenena. Mpandrafitra an-tranonkala [web developer] , Milad Kawas Cale  sy Harout Ekmanian, mpikambana ao amin'ny TEDx Aleppo nanasongadina fa ilain'ny Syriana ny mahita vahaolana:
Tokony hojerena akaiky hatrany ny fijalian'ireo vahoakantsika, farafaharatsiny amin'ny endrika ara-maoraly sy maha-olombelona. Amin'ny filazana izany, dia tsy tokony hifarana hatreo ny fiainana. Tokony ankasitrahana ny fikasana hitady vahaolana hamahana ny korontana iainan'ny vahoakantsika. Amin'izany fisainana izany, mandrisika ny TEDx YPU izahay ary maniry ny tsara indrindra ho azy ireo. Mihevitra izahay fa tokony ho maro ny tetikasa TEDx ao amin'ny faritra hafa ao #Syria, rehefa tsy mampidi-doza ny fiainan'ireo mpikarakara, mpandray fitenenana sy mpanatrika izany.
Araka ny filazan'ireo mpikarakara , mpianatra avy ao amin'ny Oniversite tsy miankina Yarmouk, mpianatry ny oniversite miisa 25 ary mpandray fitenenana 10 manana ny maha-izy azy hiresaka ny lohahevitra “hevi-baovao” no hanatrika ny hetsika.
Hetsika TEDx voalohany ao Syria ny TEDxYPU, satria nahazo ny fahazoan-dalana hikarakara ny karazana hetsiky ny TEDx oniversite avy amin'ny fikambanana TED iraisampirenena izahay. Mpianatry ny oniversite avokoa ireo mpikarakara sy mpilatsaka an-tsitrapo. Ny tanjona lehibe indrindra amin'ity TEDxYPU ity dia ny hanaparitaka hevitra feno aingam-panahy (hevi-baovao), mandrisika firesahana, sy hanangana fiarahamonina TEDx ao Syria.
Na dia izany aza, araka ny nolazain'ilay mpikirakira habaka Anas Maarrawi , sarotra hoan'ny hevi-baovao no hisondrotra raha mbola any am-ponja ireo mpitondra hevi-baovao tahaka an'i Bassel Safadi,  ary raha novonoina sy nogadraina ary noterena handao ny firenena ny ankamaron'ireo Syriana malalaka fomba fiheverana .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/01/16/67134/
 fanehoan-kevitra an-tserasera : https://twitter.com/search?q=TEDx%20Damascus&src=typd
 vondron'olom-pirenena Kesh Malek: https://www.facebook.com/kesh.malek.syria/photos/a.333545153353719.72088.314668838574684/844970095544553/?type=1&fref=nf
 filazan'ireo mpikarakara: http://www.barakabits.com/2015/01/damascus-university-hosts-first-ever-tedx-event-syria
 Anas Maarrawi: https://twitter.com/anasonline
 Bassel Safadi,: https://en.wikipedia.org/wiki/Bassel_Khartabil